Ka dib markii Raadka VS Adobe jilitaankii, maxay ku kala duwan yihiin?
Tani dabcan waa su'aasha ugu weydiiyey oo ku saabsan video processing internet-ka. Oo intaan wax fiirinayay ee sharaxaada alaabta on goobta Adobe na siinayaa wax fikrad ah sababta. Waxaa muuqataa in ay xirmi weyn oo u dhexeeya labada barnaamijyada, iyo farsamo jiro, inkasta oo sida aynu arki doonaan awoodda mar walba ma macnaheedu haboonaanta, si isaga egyihiin ma fiicneyn sida uu kaga hadlay sida ay ka soo muuqan doono.
Iyadoo taas maskaxda waxaa haboon eegaya kala duwan oo muhiim ah oo u dhexeeya ka dib Dhibaatooyinka iyo Ciyaar aad u hesho is faham cad oo ah waxa ugu fiican oo xaaladda iyo sababta aad u soo qaado lahaa hal barnaamij ka badan oo kale ah.
Waxaa jira kala duwanaansho badan oo tafatir u dhexeeya labada barnaamijyada, laakiin waxaan bilaabi doonaa wakhtiga sida ugu fiican waxay u Dhawdahay inay muujisaa in diiradda kala duwan ee xirmo kasta. Ciyaar ayaa guddi ah oo aad u faahfaahsan oo waqtiga la tiro aad u badan ka shaqeynayaan dhisay in ay u dhaqaaqo oo isku dubaridi ka kooban yahay mashruuc. Ka dib markii Raadka, dhinaca kale, waxay leedahay fursado yar ee wax looga qabanayo clips badan oo loogu talagalay in lagu la qaybaha kooban ee user saaxiibtinimo hab dheeraad ah ka qabtaan.
Lagu liitaa ee Wuxuu noqon lahaa weeyn aasaasiga ah ee kala duwan, waayo, sixiddiisa clips galay filim, halka labada qaban karaan shaqo ee ilaa xad ah, jilitaankii ee waqtiga interface ka dhigayaa habka aad u fudud ula badan oo fursado dheeraad ah oo ay ka hawl ka dhigi tafatirka farsamo user.
Intaa waxaa dheer in waqtiga, jilitaankii ayaa interface ah iyo toolset dhisay tafatirka sugan oo clip salaysayn khalkhalgelinta, audio iyo video labadaba. Tani maaha wax lala yaabo, dabcan, waa Ciyaar ka dib oo dhan ugu horrayn waxa weeyi xirmo tafatir ah. By duwan, iyadoo ay jirto sixiddiisa shaqeynta gudahood ka dib Raadka, waa ma sida user saaxiibtinimo, mana fog sida dhamaystiran set qalab, iyo sida oo kale ma noqon doono jawi ku haboon aalada tafatirka ballaaran.
Tani dabcan waa salka u ah khilaafaadka ka dhexeeya labada baakadaha, shaqo u tafatirka jilitaankii bixisaa toolset dhamaystiran meel ka durugsan waxyaabaha looga baahan yahay mashaariic badan, laakiin sida dhamaystiran sida mid rabitaanka, halka ka dib Raadka waa diiradda badan oo ku saabsan darka iyo mooshin video shaqo oo uu leeyahay set qalab tafatir ah oo aan sahla hufnaan iyo fududaato in la isticmaalo.
3. fiicni Audio
Suuqa maanta qayb ka maqal ah soo saarka video ah uu noqon karaa mid muhim ah sida dhinacyada muuqaal, clip fiicni codka gudahood jilitaankii waa aalad xirfad fasalka loogu talagalay in ay bixiyaan gacanta saxda ah in ka badan hal mashruuc oo wax soo saarka audio iyo ka mid awood u leh inay isticmaalaan heerka plugins warshadaha VST3 . Sababtoo ah ka dib Raadka ugu horrayn waa codsi kooban waxaa ka maqan taxadirayo ee jilitaankii halkaas oo maqal ah waa ay ka walwalsan. Mar kale ma aha in la akhriyo sida isagoo barnaamijka ka hooseeya, waxay si fudud u leedahay aag gooni ah.
4. Mercury Radidiyaha Engine
Marka la eego ka shaqeynayaan gartay ayaa laga yaabaa in aysan ugu sareysa ee liiska, laakiin jilitaankii adeegsanayaa si ay u shaqaaleeyaan labada software (waxtar leh) ama hardware (cajiib), haddii loo maleeyo in aad haysato kaarka naqshadeynta socon, dardargalinta waqtiga dhabta ah daawashada renderless ee clips oo isku xigxigta. Tani waxay abuurtaa aalada ah si deg-deg ah ee tafatirka ka badan waxaa suurtagal ah la dib Dhibaatooyinka ka baxsan qalabka hore u soo sheegnay iyo xayiraad interface.
In la eego tafatirka ay tahay meeshii ay dib Dhibaatooyinka kaliya waa ma u dhigma oo dhan, interface ka camera multi gudahood jilitaankii waa laga featured oo u ogolaanaya on isbedelka iyo itusi xagal ka caagan oo awood u leh inay u hagaagsan oo ah hal irbad iyada oo camera badan oo isku mar ah. Sida yiri, shaqeynta tafatirka ee la bixiyo halkaan ay tahay waxa jilitaankii jirto, iyo halka labada Ciyaar iyo dib Dhibaatooyinka jira baakadaha video salaysayn khalkhalgelinta, tafatirka iyo bacrimin u yihiin la eego aad u kala duwan, iyo waxyaabaha ay ka tarjumayaan kala duwanaanshaha kuwa.
Inta badan iska fududaysto laakiin aad muhiim u ah mashruuca aaminnimo, xarumaha maamulka warbaahinta gudahood jilitaankii waxaa loogu talagalay baahida sixiddiisa-soo-saarka iyo awood hab sahlan urur mashaariicda waaweyn oo aan ahayn ka dib Raadka.
Tani waa meesha ay ka dib Dhibaatooyinka ay timaado in iib- ah. Awoodda ay u abuuraan waji in ay ula socdaan iyada oo goobaha waa qayb asaasi ah ka dib Dhibaatooyinka aalada iyo sababta ay sidaas u fiican yahay saamaynta abuurka iyo compositing. Ma jiro mid saameyn taas ay u dhaba gaari gudahood jilitaankii sida ay maraakiibta, iyo xitaa ku dar iyadana marnaba gaari doonaan ka beddelid iyo hufnaan u isticmaali ujeedada interface loogu tala galay bixisaa.
The tracker camera 3D gudahood ka dib Raadka waa aalad cajiib ah oo waxtar leh loogu talagalay in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kaamirada goobta la siiyo gudahood in ay oggolaadaan in layers cusub in lagu daro in si hufan u dhigma goobta asalka ah, oo muhiim u ah shaqada kooban oo si fudud aan suurto gal gudahood jilitaankii.
Aruurinta qalab gaar ah gudahood ka dib Dhibaatooyinka codsan saamaynta ay gacanta ku dhaqaaq, xakamaynta midabka, mugdiga galinaya Hooskooda kala guurka iyo koob weyn tahay, iyo halka Ciyaar ka mid ah qaar ka mid ah ay u gaar ah, waxaa iska cad in halkan ka dib Raadka ayaa ku laayeen oo mar kale nuuriya hab oo kala duwan laga qaato barnaamij kasta. Ciyaar ugu horayn codsiga tafatir ah, waxaa loogu tala galay in ay awood tafatirka ugu dhaqsiyaha badan, ugu hufan oo ugu tayada aan toosan ee mashruuc suurto gal ah. Dhismeedka in gudahood waxa ka mid ah awoodda, labada natively iyo plugins, in ay ku daraan ka duwan kala guurka xadidan iyo saamaynta si loo caawiyo geedi socodka tafatir ah.
Ka dib markii Raadka, si kastaba ha ahaatee, waa codsi ku dhisan saamaynta, waxaa loogu tala galay in ay u oggolaadaan kala duwan oo ku dhow xad lahayn oo ah saamaynta, kala guurka iyo animations lagu daro mashruuc via compositing iyo sida oo kale waxay leedahay xoolo ah qalab si ay awood aalada hufan kuwa hawlaha, ay ka mid yihiin qalabka tafatirka qaar ka mid ah in ay u badan tahay in loo baahan karo in shaqo.
Waxaan soo arkay ka hor sharaxay in marka la eego Word & Excel. Waxaad ka koobanahay kartaa warqad ee Excel iyo abuuro isbiriidhshiit ah Word la shaqeynta miisaska, balse natiijada kama dambaysta qaadan doontaa waqti dheer oo aan marnaba u fiicneyn sida wanaagsan hab in ay samaynayaan noqon. Tani dabcan waa habka ugu wanaagsan ee ay u sharxaan xidhiidhka ka dhexeeya Ciyaar iyo ka dib Raadka.
Haa, xaashi Creech ka dhigaa labada barnaamijyada u muuqdaan kuwo xoogaa u dhigma, laakiin waa in culays la mid ah codsi kasta oo muujinaya sababta ay u kala duwan yihiin si ka badan. Ugu dambeyntii, isticmaalka ugu wanaagsan ee barnaamijyadan waxaa wada, wayna is dhameystiraan dhammaataan.
> Resource > Video > Ka dib Raadka VS Adobe jilitaankii, 9 Khilaaf aad u sheegto oo ka mid ah waxaa ka wanaagsan?